တနင်္ဂနွေ သားသမီးတို့၏ စိတ်နေသဘောထားနှင့် အမူအကျင့်များ …. – XB Media Myanmar
တနင်္ဂနွေ နေ့နာမ်များဟာ လူ့ဘဝကို စရောက်ပီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတယ်၊ ငိုလွယ်တယ်၊ ဒေါသဖြစ် လွယ်တယ်။ ပျော်ပျော်လည်း နေတတ်သလို ဒေါသဖြစ်ရင်လည်း သူ မဟုတ်တော့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။မိသားစု အပေါ်တွေမှာလည်း သံယောဇဉ် ရှိတတ်သလို ဆွေမျိုးသားချင်း တွေကိုလည်း ချစ်တတ်ကြတယ်။ တနင်္ဂနွေတွေဟာ မိသားစုအပေါ်ကို သိတတ်တယ်။ စွန့်စားပီး ပေးဆပ်တတ်တာလည်း တနင်္ဂနွေပါ။
တနင်္ဂနွေများဟာ စိတ်ပြတ်သား သလောက် အစွဲအလန်းလည်း ကြီးတတ်ပါတယ်။ 1 ယောက်ဆို တယောက် အပေါ်မှာလည်း စိတ်စွဲနေတတ်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကို သူများ လက်ထဲကို မရောက်စေချင်တာ တနင်္ဂနွေ။ တခါတလေ တစ်ယူသန်တဲ့ စိတ်တွေလည်း ရှိတတ်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင်ဒါပဲ မပြောင်းလဲတတ်ဘူး၊ ခေါင်းနဲနဲမာတယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ နေရာကို ရောက်အောင် သွားတတ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ ဘယ်တော့မှ လက်မလျော့တတ်တာ တနင်္ဂနွေပါ။ တနင်္ဂနွေတွေဟာ အပြင်မှာ ပြတ်သားသလို နေတတ်ကြပေမဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အစွဲအလန်း ကြီးတတ်တဲ့ နေ့နာမ်များပဲဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အရှေ့မှာ စိတ်မကောင်းစရာလေးတွေ တွေ့ရင် သနားတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ ကူညီလိုတဲ့ စိတ်တွေလည်း တနင်္ဂနွေမှာ အပြည့်ရှိပါတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ နည်းစနစ်ရှိရှိ လုပ်ကိုင်တတ်တာ တနင်္ဂနွေပါ။ လူတွေရဲ့စိတ်ကို စူးစမ်းလေ့လာရတာကို ဝါသနာပါကြတယ်။
တနင်္ဂနွေများဟာ အားနေရင် သီချင်းနားထောင်တာတို့ သီချင်းဆိုတာတို့ ဝါသနာပါပီး စိတ်အေးလက်အေး နေရတာကို နှစ်သက်ကြတယ်။စကားပြောရင် တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ပြောဆိုတတ်ပီး စွဲဆောင်မှုရှိစွာနဲ့ ပြောဆိုတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာလည်း တနင်္ဂနွေပါ။
တနင်္ဂနွေများရဲ့ အချစ်ရေးဟာတော့…ချစ်ရတဲ့သူကို အရမ်းချစ်ပေမဲ့ အနေဝေးနေကြတယ်. တနင်္လာ သားသမီးတို့၏အကြောင်း သိကောင်းစရာ တနင်္လာတွေဟာ မိတ်ဆွေ ပေါများတယ်… လူချစ် လူခင်လည်း ပေါများတဲ့ နေ့နာမ် ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဒေါသ ထွက်တတ်ပေမဲ့ အပြင်မှာ ထုတ်ပီး အရမ်း မပွားပါဘူး။ မိသားစု အပေါ်မှာ ဆိုရင်တော့ နဲနဲ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။အစွဲအလန်း ကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် အပေါ်မှာဘဲ စွဲလမ်း နေတတ်တယ်။ စကားပြောရင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိစွာနဲ့ ပြောဆိုတတ်တာ တနင်္လာပါ။
ခင်ရတဲ့ အပေါင်းအသင်းနဲ့ စကားပြောနေချိန် စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စိတ်ဝင်တစား လက်ခံ နားထောင် ပေးတတ်တယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေတတ်သလို သူများကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ တခါတရံ ဖန်တီး ပေးတတ်တယ်။ တနင်္လာတွေက သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကို မက်မောစွာနဲ့ ခင်တွယ်တတ်တယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ စိတ်ကူး အမြင်ကျယ်တယ်။ ဗူးဆို ဖရုံမသီးတတ်ဘူး။ ဖြစ်ချင်တာကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရမှ ကျေနပ်တာ တနင်္လာပါ။ တခါတလေတော့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သွားတာ နဲနဲလေး လွဲချော်နေတတ်တယ်။
စနေ သားသမီးတို့၏ စိတ်နေသဘောထားနှင့် အမူအကျင့်များ